Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaraha Iyo Dalxiiska Somaliland Oo Iska Fogaysay Eedo Musuq Oo Loo Jeediyeen – | Saxil News Network
Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaraha Iyo Dalxiiska Somaliland Oo Iska Fogaysay Eedo Musuq Oo Loo Jeediyeen –
Hargeysa(SAXILNEWS):-Masuuliyiinta wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war ku xidhiidhinaya Fadeexaddo musuq-maasuq oo dul-hoganahaya wasaaraddooda iyo khilaaf saddex geesood ah oo u dhaxeeya wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, kaas oo ay daabaceen qaar ka mid ah mareegaha.
Wasiirka wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland Md. Axmed Cabdi Kaahin oo uu weheliyo Agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Md. Maxamed Xuseen Axmed (Dhabeeye) oo maanta war-baahinta kula hadlay xarunta wasaaraddaas ayaa waxay guud ahaanba iska fogeeyeen warkaas, waxaanay hoosta ka xariiqeen in guud ahaanba aanu jirin khilaaf nooc kasta ah oo u dhaxeeya masuuliyiinta ugu sareeya wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha.
Ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Md. Axmed Cabdi Kaahin, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa “Waxaan u sheegaya una cadeynayaa cid kasta oo warkaas maqashay ama arragtay xaqiiqdii inaanu sal iyo raad toona lahayn oo haba-yaraate aanu jirin khilaaf noo dhaxeeya aniga iyo masuuliyiinta iga hooseeya ee wasaaradda. War-baahinta xurmo ayaan u haynaa laakiin qaar ka mid ah waxay shaqo iyo caado ka dhigteen inay cambaareyn joogta ah ku qaadaan masuuliyiinta iyaga oo aan u meel dayeyn. Website-yada warkan naga qorayna waxaanu leenahay warkaas aad sheegaysaan waxaanu idin leenahay waanigan xaadirka ahee nagu soo cadeeya oo bal wax marag idiin noqda keena” ayuu yidhi
Wuxuu hadalkiisi sii raaciyey “Waxaad tidhaahdeen wasiirku Odhat ayuu geliyay wasaaraddii oo lacago la musuq-maasuq ayaa jira, bal beentaas intaa leeg u fiirsada. Agaasimaha iyo wasiir xigeenkayga wax khilaaf ah oo naga dhaxeeya ma jiro oo si fiican ayaan u wada shaqaynaa iyaga iyo Agaasimo waax-yeedada kale. Toddobaadkii hore Burco ayaan u tagnay hawlaha qabsoomida ciyaaraha gobollada imikana waxaanu u soconaa magaaladda Borama, markaas sidaas ayaanu u wada shaqaynaynaa khilaaf muuqda iyo mid qarsoon oo jiraana ma jiro saxaafaddana waxaan leeyahay annagu waanu idin ixtiraamaynaa ee idinkuna ceebaynta iyo cambaareynta indho la’aanta ah ee qaarkiin ku kacaan iska daaya”.
Waxaa isaguna dhiniciisa waxba kama jiraan ku sheegay warkaas Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyaradda iyo ciyaaraha Md. Maxamed Xuseen Dhabeeye, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa “Waxaa warkaas xaqiiqda ka fog ee beenta ah naga qoray laba shabakadood oo aanan rabin inaan magacyadooda sheego oo iyagaa is garanaya, saxaafadda dad isku dhaw ayaanu nahay ka Agaasime ahaan oo saaxiibo ayaanu nahay laakiin ismaan lahayn sidaas ayaa fadeexad aan jirin loo buun-buunin doona. Ma rabo inaan ka sii hadlo beeninta warkaas oo wasiirka ayaa ka hadlay, laakiin waxaan bahda saxaafadda ku guubaabin lahaa inay iska qabtaan kuwa calooshood u shaqays-tayaasha ah ee cambaaraynta aan jirin dadka la daba taagan, waayo kuwaas waxay muuqaal xun ka bixinayaan saxaafadda iyo saxafiyiinta dalkeena. Waxaan leeyahay wax-qabadkayaga iyo ka wasaaraddaba indhaha caafimaadka qabaa way arkaan iyo ciyaarihii iyo dhallinyaradaba sida aanu ugu heelanahay ee ay xukuumadu ugu heelan tahay ee ay mar walba diyaar ugu tahay inay wixii awoodooda ah u qabtaan” ayuu ku soo koobay hadalkiisi Agaasime Dhabeeye.